Bentley Map waxay rabtaa inaad u guurto V8i - Geofumadas
Bentley Map waxay rabtaa inaad u guurto V8i
Abriil, 2009 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Bentley ayaa bilaabay olole xoog leh si ay u sameeyaan Geographics users Microstation in V8i loo gudbin, waayo, waxaa la bixiya qiimaha gaarka ah iyo isgaarsiinta degdegga ah ee faa'iidooyinka in qof laga yaabaa in Bentley Map marka loo eego tartanka.
1. Isdhexgalka CAD iyo GIS
2. Ka faa'iideysta awooda juqraafi ee Oracle
3. La shaqee midkood Oracle Spatial ama GIS server
4. Kordhi wadashaqeynta GIS-gaaga
5. Qaabdhismeedka weyn iyo kartida shakhsi ahaaneed
6. Raadinta khariidadaha aan dhibaato lahayn
7. Shaqeynta GIS ee fiican
8. Abuuritaanka iyo daabacaadda khariidadaha sahlan
9. Sheyada lagu aqoonsado suuqa; si ballaaran loo aqbalo
10. Bixinnada la heli karo dalabyada muhiimka ah.
Bentley wuxuu bilaw u yahay dhammaan dadka isticmaala kuwa ku faraxsan tusaalooyinkoodii hore ee XM (V8.9) oo aan dareensaneynin baahida loo qabo in la sameeyo maalgelin ama ugu yaraan lacagtu xaddido.
MicroStation GeoGraphics J
MicroStation GeoGraphics 5.7 ... uuuuy !!!! tani waa inay noqotaa SE
MicroStation GeoGraphics V8
MicroStation GeoGraphics V8.1, Waxaan filayaa in 8.5
Waqtigan xaadirka ah waxay ku siiyeen 40 qiimo dhimis ah iibsashada liisanka illaa 30 ee July ee 2009. Ma aha wax xun, laakiin waa inay sameeyaan shaqo adag oo ku saabsan xiriirinta iyo bixinta gargaar si ay u dhisto xadhigga; Waqtigan xaadirka ah, saacad (1 saac) ayaa lagu dhawaaqay inta u dhexeysa bilaha Abriil iyo Maajo ee loogu talagalay dadka isticmaala Hispanic Geographics si ay u arkaan faa'iidooyinka Bentley Map. Waxaan sidoo kale aragney kordhin ololeyaal xayeysiis ah iyada oo loo marayo AdSense, iyo xitaa seminaaro Ingiriis ah (kuwaas oo ka sarreeya Hispanics) waxay bixinayeen si ay u soo diraan roodhida nasashada ee dadka isticmaala diiwaangelinta seminaarka.
Marka laga reebo qiimaha ruqsadaha, kharashka la-talinta si loo helo xogta, la qabsado kobcinta, codsiyada dib u habeyn ... waa mid adag.
Ma aha wax walba oo ku jira iibsashada liisan, sida muuqata waa lagama maarmaan in la helo adeega SELECT ama ugu yaraan taas waa waxa ay xayeysiisku sheeganayaan. Oo waxay tahay in saameynta si ay u haajiraan Mashruucani wuu fudud yahay iyada oo ku xiran faa'iidooyinka weyn ee sahlan cusub uu la leeyahay isdhexgalinta soomalida, topolojiga iyo interface surem
Laakiin sida aan horay u sheegay, adag Waa xogta halkii mslinks fudud via OLEDB waa in hadda la horumariyo iyo codsiyada XML gundhig waa isku ururiso ... daray is dhexgalka la ProjectWise oo laga yaabo, Geoweb Publisher, Oracle astaanta ama ArcGIS Server astaanta kaydadka.
Post Previous«Previous Ku xir Microstation V8i oo leh adeegyo WMS
Post Next Isku-xirka Xogta, Map-ka AutoCAD - Khariidadda BentleyNext »